फागुन १९, काठमाडौं । लाभांश सार्वजनिक भएकै दिन बुधवार नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ को सञ्चित मुनाफाबाट प्रतिशेयर रू. ४० का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय बुधवार सार्वजनिक गरेको हो । हालसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा कम लाभांश कम्पनीले यस वर्ष प्रस्ताव गरेको हो ।
विगतका वर्षहरुमा ५५ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले गत वर्ष पनि ४५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । कम लाभांश प्रस्तावका कारण पनि घटेको बजारमा कम मूल्यमै शेयर विक्री गर्न लगानीकर्ताहरु तयार भएको देखिए ।
जसका कारण मंगलवार रू. १ हजार २७२ कायम भएको कम्पनीको शेयरमूल्य बुधवार रू. १ हजार १९९ कायम भएको हो । एकै दिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ७३ ले घटेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक बजार पूँजीकरण रहेको उक्त कम्पनीको पूँजीकरण एकै दिन रू. १० अर्ब ९५ करोडले घटेको छ ।
मंगलवारको तुलनामा बुधवार कम्पनीको शेयरमूल्य घटेसँगै कुल बजार पूँजीकरणमा कमि आएको हो । मंगलवार रू. १ खर्ब ९० अर्ब ८० करोड रहेको बजारपूँजीकरण बुधवार रू. १ खर्ब ७९ अर्ब ८५ करोडमा झरेको हो ।
बुधवार यस कम्पनीको सबैभन्दा बढी रकमको शेयर खरीदविक्री भएको छ । यस दिन कम्पनीको रू. २९ करोड ९७ लाख ६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।